किन बालुवाटार छिरे वामदेव ? « Drishti News – Nepalese News Portal
किन बालुवाटार छिरे वामदेव ?
२५ असार २०७८, शुक्रबार ९ : १२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र उत्पन्न राजनीतिक तथा सांगठानिक विग्रहमा तटस्थ भूमिकामा देखिएका नेता वामदेव गौतम अन्ततः ‘नफर्किने गरी’ ओली गुटमा विलय भएका छन् ।
एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्न उनले ठूलो मेहनत गरेका थिए । पार्टी एकतामा ओलीले तातोपानी खन्याएपछि एकता जोगाउन उनले धेरै प्रयास गरे । ओली र प्रचण्डबीच चर्किएको द्वन्द्व मिलाउन उनले कहिले खुमलटार, कहिले बालुवाटार गर्दै सात महिना बिताए ।पार्टी एकता जोगाउन खुमलटार सकारात्मक भए पनि बालुवाटार नकारात्मक भएका कारण एकता भाँड्ने भडुवा ओली नै हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाले र, बालुवाटार पनि जान छाडे ।
त्यसो त ओलीबाट एकपटक होइन, पटक–पटक ठगिने नेता वामदेव गौतम हुन् । तर उनको चेत कहिले पनि खुलेन । ओलीको शब्दमा ‘वामदेव बेलुन हुन्, जसको न तौल हुन्छ, न त आयतन ।’ अहिलेको घटनाले ओलीले २०५४ सालमा पार्टी फुट्दा त्यतिबेला भनेको कुरा पुष्टि भएको छ । अब वामदेव ओलीमा विलय भएपछि उनको राजनीतिक भविष्य पनि ओलीसँगै विलय हुने निश्चित छ ।
वामदेव गौतमले पुस ५ देखि जेठ १७ गतेसम्मको प्रतिनिधिसभा विघटन, ओलीकै हठपूर्ण व्यवहारका कारण भएको र तत्कालीन नेकपा हुँदै अहिलेको एमालेसम्म विभाजन हुने तहको समस्या पनि ओलीले नै खडा गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आएका थिए । उनको धारणा सुन्दा र बुझ्दा उनी झलनाथ–माधव नेपाल समूह निकट थिए । उनैले घोषणा पनि गरेका थिए, ‘एमालेकै नाममा समानान्तर गतिविधि गर्दिनँ, तर माधव नेपालहरुले अर्को पार्टी घोषणामा गरेमा म त्यतितिर लाग्छु ।’
तर, वामदेवका ती धारणा र घोषणालाई घरभित्रैको घेराबन्दीले ओली गुटको पाऊमा पुर्याएको छ । यद्यपि, उनले गुटको बैठकमै पनि केपीको आलोचना र गलत कार्यशैलीविरुद्ध निरन्तर लडिरहने धारणा व्यक्त गरे । भौतिक रुपमा आफू त्यो गुटमा उपस्थित भए पनि माधव नेपालहरुलाई गरिएको कारवाहीको विरोध गरे । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ताका लागि केपीले दिएको अल्टिमेटम खारेजीको माग गरे । पार्टी एकता संकटमा पर्नुको कारण र एकताका निम्ति सबभन्दा पहिला केपी ओलीले नै त्याग गर्नुपर्ने अडान पेश गरे । र, अन्ततः आफूचाहिँ एक्लै ओली गुटतिरै आएको घोषणा गरे । यसरी उनकै भाषाले पनि भन्दैछ, ‘म रहरले हैन, बाध्यताले यहाँ आएँ ।’
श्रीमतीको पनि साथ नपाएपछि
वामदेवपत्नी तुलसा थापा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद हुन् । उनलाई पुस ५ को कदमपछि ओलीले गठन गरेको १५ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाइएको थियो । त्यतिबेला पति वामदेव भने दुवैतिर नलागी ‘पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान’ चलाइरहेका थिए । पतिको अभियानलाई तुलसाले व्यक्तिगत रुपमा त साथ दिइन्, तर सांगठानिक रुपमा उनी केपीसँगै रहिन् । पत्नीले मात्र हैन, छोरा हरिश गौतमले समेत शुरुदेखि नै केपीलाई साथ दिए । हरिस व्यापारमा व्यस्त छन् ।
यसरी घरभित्र ओलीपक्षीय घेराबन्दी हुनुका पछाडि पनि तुलसा र हरिशका केही बाध्यताहरु रहेको चर्चा बालुवाटारमा हुने गरेको छ । परिवारलाई बाध्य बनाउने र अन्ततः वामदेवलाई ओलीसँगै उभ्याउने बालुवाटारको शुरुदेखिको रणनीति अहिले सफल भएको छ । ओली निकट नेताका अनुसार ‘यो कुरा बुझ्न गत वर्षको बैशाखदेखिकै घटना सम्झनुपर्छ ।’
केपीले गत वर्ष वैशाखमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिए । तर, त्यो कुरा कार्यान्वयन गरेनन् । यसपछि वामदेव प्रचण्ड, माधव नेपालहरुसँग मिलेर ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्ने काममा सक्रिय भए । पटक–पटकको बैठकमा ओलीलाई ‘तातै खाऊ, जल्दी मरु’ जस्तै गरी कि प्रधानमन्त्री, कि पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्ने कुरा चर्कोसँग उठाएको उठायै गरे । तत्कालीन नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा वामदेव जता उभिन्थे, वहुमत त्यतै पुग्थ्यो । तर, निर्णायक समयमा वामदेवले फेरि केपीलाई नै साथ दिए । फलस्वरुप केपीको पद जोगियो । यसो हुनुको कारणबारे प्रचण्डले आफ्नो निवासमा भेला भएका पूर्वमाओवादीहरुसँग भनेका थिए– ‘एउटा व्यापारी लागेर सबै खेल बिगारिदियो ।’ ती व्यापारीलाई प्रयोग गरेर अहिले वामदेव ओलीको टाङमुनि छिरेका छन् ।’
भावी अध्यक्ष वामदेव ?
वामदेवको उमेरसँग उनको भन्दा बढी परिवारको स्वार्थ गाँसिएको छ । उनको उमेर ७४ वर्ष भयो । राजनीतिक रुपमा अब उनी बढीमा पाँच वर्ष सक्रिय हुन्छन्, त्यतिबेला उनको उमेर ७९ वर्षको हुन्छ । ६ वर्षका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य भएका छन् । उक्त पद समाप्त हुँदा उनको उमेर ८० वर्षको हुन्छ । त्यसपछिका निर्वाचनमा उनी उम्मेदवार हुने र सक्रिय राजनीतिमा रहने कुराको सम्भावना न्युन छ ।
पत्नी तुलसा आफैँमा एमालेका पुराना राजनीतिक कार्यकर्ता हुन् । तर, उनको सार्वजनिक परिचय ‘वामदेवपत्नी’ कै रुपमा स्थापित छ । छोरा हरिशसँग ‘वामदेवको छोरा’ भन्नेबाहेक अर्को कुनै राजनीतिक परिचय छैन । उनी त्यही परिचयका आधारमा युवा संघ र पार्टीको जिल्ला कमिटीसम्म पुगेका छन् । उनी भाषणकला र वैचारिक वहस नभएका कार्यकर्ता हुन् । यो स्थितिमा वामदेव सक्रिय रहँदैमा केही हासिल भयो भने भयो, नत्र ‘हात लाग्यो शून्य’ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।
त्यसमाथि आर्थिक लाभदेखि सबै कुरा वामदेवकै नाममा हुने भएका कारण घरायसी घेराबन्दीमा वामदेव पारिएका हुन् । अहिले तुलसाका केही व्यवसाय, हरिश र उनकी पत्नीको माइक्रोफाइनान्स र अन्य व्यवसायहरु छन् । यसप्रकार वामदेव आफैँमा वैचारिक रुपमा दृढ र निष्ठावान नेता हुँदाहुँदै पनि अहिले केपीसँग जानुका पछाडि उमेरजन्य पारिवारिक बाध्यता रहेको चर्चा पनि हुने गरेको वामदेव निकट एक व्यक्तिले दृष्टिलाई बताए ।
तीनपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका वामदेव जसरी पनि एकचोटि प्रधानमन्त्री हुने चाहना राख्छन् । तर, त्यो चाहना केपीबाट पूरा हुने सम्भावना अब समाप्त भइसकेको छ । यद्यपि, भइहालिन्छ कि भन्ने लालचमा उनमा देखिएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिए १०औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष बनाउने भनिएको छ । त्यही लोभमा वामदेव फसे ।
वामदेव निकटहरु माधवतिर
त्यसो त वामदेव आफैँ पनि राजनीतिक रुपमा प्रष्ट व्यक्ति हुन् । उनको प्रष्टताकै लयमा लामो समयदेखि वामदेवसँग नजिक रहेका नेताहरु अहिले माधव नेपालतिर छन् । मन्त्री पद पाएका कारण गणेश ठगुन्नासहितका केही व्यक्ति र ‘केही झर्ला र खाउँला’ भनेर हरि पराजुली वामदेवसँगै छन् । राजनीतिक रुपमा प्रष्ट भएकाहरु चाहिँ झलनाथ–माधव समूहमा लागेका छन् ।
केशवलाल श्रेष्ठ, डा.केशव खड्का, वलराम बास्कोटा, लालबहादुर विश्वकर्मा, डिबी कार्की, विश्वमणि सुवेदी, माधव पन्त, प्रमेश पोखरेलहरु उक्त समूहका विभिन्न जिम्मेवारीमा छन् । त्यसमध्ये तीन जनालाई विभिन्न संगठनको प्रमुख बनाइँदैछ । वामदेवको एकता अभियानलाई शुरुदेखि नै अस्वीकार गरेका वलराम बास्कोटा किसान संगठनको अध्यक्ष हुँदैछन् । मोहम्मद ताज मियालाई मुस्लिम संगठन र विश्वमणि सुवेदीलाई प्रेस चौतारीको प्रमुख बनाउने माधव पक्षको तयारी छ । माधव पन्त अखिलको उपाध्यक्ष बनाइएका छन् ।
वामदेवसँग नजिक मानिने बाजुराका सांसद लालबहादुर थापा, भुपेन्द्र थापा, तुलसीपुरका मेयर घनश्याम पाण्डे, सामुदायिक वन अभियन्ता भारती पाठकहरु ओलीतिर लागेका छन् । वामदेव समूह छाड्नेमध्ये वलराम बाँस्कोटा अबको राजनीति वामदेव शैलीबाट नचल्ने बताउँछन् । ‘उहाँले भनेको एकता अभियान दक्षिणपन्थलाई सहयोग गर्ने र अन्ततः केपी ओलीमा गएर आत्मसमर्पण गर्ने चालबाजी हो भनेर हामीले शुरुदेखि भन्दै आएका थियौँ’, उनले दृष्टिलाई भने, ‘अन्ततः हामीले जे विश्लेषण गरेका थियौँ, घटनाक्रम त्यही ढंगले अगाडि बढिरहेको छ ।’